Antananarivo: Ankizy 40 notoloran’i Edgard Razafindravahy sy ny « Habaka » mari-pankasitrahana
Ireo ankizy nivoaka ny fiofanana. / www.madaplus.info
Tan-tsoroka ara-tsosialy. Nivoaka ny alarobia hariva teo tetsy amin'ny «Dôme Rta» tetsy Ankorondrano, ny andiany voalohan'ireo ankizy mpianatra nanaraka fiofanana manokana momba ny fianarana informatika, izay teo ambany fiahian’i Edgard Razafindravahy niaraka tamin’ny fikambanana « Habaka ».
Miisa 40 izy ireo no nahazo ny fanamarinam-pianarana avy amin'ity fikambanana ity, ka ireo ankizy mpianatra avy amin'ny kaominin'Ambohimanarina no nisitraka izany voalohany, taorian'ny fiofanana nandritra ny telo herinandro teo ho eo.
Maneho ny hafaliam-pony manoloana izany, i Tsioriniaina Felantsoa, ankizivavy kely 13 nahazo ny naoty tsara indrindra nandritra izay fihofanana izay. «Tena nahazoana zava-tsoa tokoa ny fampianarana sy ny fanomezana ny fanamarinam-pianarana satria mety hahafahana mampy bebekokoa amin'ny fitadiavan'asa any aoriana any», hoy izy.
Ankilan'izay, nambaran'i Zo Sahaza Marline Ramarosandy, tompon'andraikitra voalohany tamin'ity tetikasa fampihofanana ity fa «tsy nanavahana na iza na iza, fa antsapaka no nanatanteraka ny fisokajiana ireo ankizy nanaraka io fihofanana maimaimpoana io». «Isan'ny tena nimasoana manokana ny fampianarana azy ireo sahady hahay hamorona zavatra iray amin'ny fampiasana ny informatika. Hita ho tena liana tamin'izany tokoa ireo ankizy, ka nahavelom-panantenana ny vokatra voalohany», hoy izy.
Ilay hetsika "Coder Bus". / www.madaplus.info
Tsy nohadinoin’ity tompon’andraikitra ity ny nankasitraka an’i Edgard Razafindravahy tamin’ny fanampiany sy fanohanany ny hetsika « Coder Bus ».
Marihina fa nanolotra fiara lehibe iray ny tenany ho ampiasain’ity fampianarana informatika maimaimpoana ity.
Notsindrian' i Édgard Razafindravahy, Ray mpiahy ireto ankizy nandrato fahalalana ireto, fa «zava-dehibe tokoa ary ilaina amin'ny fanohizana ny fianarana ny fahaizana ny informatika». Any amin'ny tany mandroso, hoy izy, dia sokajiana ho isan'ny tsy mahay manoratra izay tsy mahay mampiasa solosaina.
« Zava-dehibe rankizy ny fahaizana mikirakira izany informatika izany, satria hahafahanareo mivelatra sy manitatra ny sainareo ary ilaina amin'ny fanohizana ny fianarana. Na izany aza, aoka tsy ho adinonareo ihany koa ny fanajana ny ray aman-dreninareo, izay milofo mandrakariva eo amin'ny fanabeazana anareo», hoy hatrany ny tenany, raha nanatrika ny famoahana ity andiana mpianatra voalohany ity. Isan'ny bainga voalohany vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny fikambanana «Habaka» sy i Édgard Razafindrazavahy ity vita tamin'ny alarobia ity, santatra am-bavarano ihany anefa izany, ary mbola hisy ny fanohizana izany.